Ask.com ကမေးနေသူလား။ | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, ဧပြီ 26, 2007 အင်္ဂါနေ့, နိုဝင်ဘာလ 5, 2019 Douglas Karr
သငျသညျအကြှနျုပျ၏မကြာသေးမီလင့်များတသတိထားမိကြပေမည် Ask.com နှင့် အသက်ရှင်သော သို့ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည် ဇယားများ စံ။ sitemap ဆိုတဲ့ဝေါဟာရကတော်တော်လေးရှင်းလင်းလွယ်ကူပါတယ်။ အဲဒါကသင့်ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုအလွယ်တကူပုံဖော်နိုင်တဲ့ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွေအတွက်နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ Sitemaps ကိုတည်ဆောက်ထားသည် XML ကို သူတို့ပရိုဂရမ်မှတဆင့်အလွယ်တကူစားသုံးနိုင်အောင်။ ငါ့မှာ stylesheet ကိုကျွန်တော့် sitemap မှာသုံးပါတယ် သတင်းအချက်အလက်ပါ ၀ င်တာကိုတွေ့နိုင်တယ်။
Sitemaps နှင့် WordPress
နှင့် WordPressသင်၏ sitemaps များကိုအလိုအလျောက်တည်ဆောက်ရန်နှင့်တည်ဆောက်ရန်လွယ်ကူသည်။ Install လုပ်ရုံပါပဲ Google Sitemap ပလပ်အင်။ ငါ 3.0b6 ပလပ်အင်ဗားရှင်းကို run နေတယ်၊ ငါမကြာသေးမီက plugin ကိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်လည်း Ask.com တင်သွင်းမှုထောက်ခံမှုကဆက်ပြောသည်။ ကျွန်ုပ်၏အပြောင်းအလဲများကို developer သို့တင်ပြပြီးပါပြီ။ သူထပ်ဖြည့်ပြီးနောက်ဗားရှင်းကိုထုတ်ပေးမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
Ask.com သို့သင်၏ Sitemap ကိုတင်ပြခြင်း
သင်သည်သင်၏ sitemap မြေပုံကို Ask.com သို့ကိုယ်တိုင် တင်၍ သူတို့၏ site တင်သွင်းသောကိရိယာမှတစ်ဆင့်ပေးပို့နိုင်သည်။
ငါမြင်ရတာစိတ်လှုပ်ရှားသွားပြီးချက်ချင်းပဲငါ့ဆိုဒ်ကိုတင်လိုက်ပြီးပလပ်အင်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုကိုစတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ Ask.com သည်မကြာသေးမီကသူတို့၏ပင်မစာမျက်နှာကိုပြုပြင်ပြီးစာနယ်ဇင်းအချို့ရရှိခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏နေ့စဉ်လည်ပတ်မှု၏ ၅၀% ကျော်မှလာသည် Google ဒါပေမယ့်ငါကနေတစ်ခုတည်း visit ည့်သည်ကိုတွေ့မြင်သေးရှိသည် Ask.com! ငါတစီးရှိ၏ကြည့်ပါ Yahoo က! ည့်သည်များနှင့်အနည်းငယ် အသက်ရှင်သော .com ည့်သည်များ…ဒါပေမယ့် Ask.com visitors ည့်သည်မပါ။ Ask.com ရှာဖွေမှုရလဒ်အချို့ကိုကြည့်ရှုရာတွင်၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်အသက်ကြီးလာသော်လည်းကျွန်ုပ်၏ဒိုမိန်းအမည်နှင့်ဆောင်းပါးအဟောင်းများကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဤသည် Ask.com မဆိုအသွားအလာမရအဘယ်ကြောင့်သောအဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သနည်း မင်းဘယ်သူ့ကိုမှ Ask.com ကိုသုံးလဲ။
ဧပြီ 26, 2007 မှာ 11: 20 pm တွင်
ငါ ask.com ကို နောက်ဆုံးနှစ်ခါလောက် စမ်းကြည့်တော့ အရမ်းကောင်းတဲ့ ရှာဖွေမှုရလဒ်တွေ မထုတ်ပေးဘူး။ ၎င်းတင်ပြသည့်လင့်ခ်အများအပြားသည် ထိုနေရာတွင်မရှိပါ သို့မဟုတ် အမှန်တကယ်ဟောင်းနွမ်းနေပါသည်။ Google ကလွဲရင် ဘယ်သူမှ ဘာမှသုံးနေမှန်းကို မသိတော့ဘူး။ အနည်းဆုံးတော့ သူတို့က ပုံမှန် ညွှန်းတယ်။
အိုး၊ ကောင်းသော Technorati အဆင့်သတ်မှတ်ချက်။ အဲဒါတွေက လာဖို့ခက်တယ်။
ဧပြီ 27, 2007 မှာ 6: 49 AM
ကျွန်တော်တကယ်မေးကြည့်တဲ့ နောက်ဆုံးကြိုးက သူတို့မျောက်ကြော်ငြာတွေကို ပထမဆုံးမြင်ဖူးတာပါ။ အဲဒီအခါမှာ သူတို့ပြန်ရတဲ့ ရလဒ်က မကောင်းဘူးလို့ ကျွန်တော်တွေ့တယ်။ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက Technorati က သူတို့ကို ထိပ်တန်းရှာဖွေမှုလို့ မယူဆပါဘူး။ Ask တွင် သင့်ဒိုမိန်းကို ရှာဖွေနိုင်ပြီး ရလဒ် URL ဖြင့် Technorati ကို ping လုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် သင့်အား ထိပ်တန်း 100 သို့ ပေါက်မြောက်စေမည်မဟုတ်သော်လည်း ၎င်းသည် အခမဲ့ Technorati backlink ဖြစ်သည်။
ဧပြီ 27, 2007 မှာ 3: 31 pm တွင်
တစ်နေ့ကို ask.com မှ hit5မှ 10 ထိ (ငါ့ဘလော့ဂ်ဟောင်းတွင်) ... နှင့်အားလုံးတူညီသောဆောင်းပါး ... ။
ဤ sitemap သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြေအနေကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသလား ကြည့်လိုက်ရအောင်
ဧပြီ 27, 2007 မှာ 6: 35 pm တွင်
ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်များသို့သွားသည့်လမ်းကြောင်းသည် Google သည် အပြတ်အသတ်ဖြစ်ပြီး yahoo နှင့် တိုက်ရိုက်ရှာဖွေမှုမှာ တစ်စက္ကန့်အကြာတွင်ရှိပြီး Ask သည် မည်သည့်နေရာတွင်မှ ရှာမတွေ့နိုင်ဟု ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
29:2007 pm မှာနိုဝင်ဘာ 9, 54
အခုမှ ဒီဘလော့ကို ရှာတွေ့ခဲ့တယ်... ဒါပေမယ့် အရမ်းကောင်းတဲ့ အရာတွေပါ။
မတ်လ 6, 2008 မှာ 10: 47 pm တွင်
ဤဆောင်းပါးသည် ဟောင်းဖြစ်သည်ကို ငါသိသည်၊ သို့သော် မင်းကို ask.com မှတဆင့် ငါရှာတွေ့ကြောင်း အသိပေးလိုပါသည်။ ရယ်စရာပဲမဟုတ်လား
အရမ်းတိကျတဲ့ တစ်ခုခုကို ရှာတဲ့အခါ ask.com ကို သုံးပါတယ်။ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် သူတို့က ကျွန်မကို လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် အမြဲညွှန်တယ်။
မတ်လ 7, 2008 မှာ 10: 36 AM
ကြားရတာ အရမ်းမိုက်တယ်။ ငါအဲဒါပဲဖတ်တယ်။ မေးမြန်း အချို့သောလူများကို အလုပ်မှထုတ်ပယ်ပြီး Google ကိုအသုံးပြုရန် စဉ်းစားနေသော်လည်း တုံ့ပြန်ချက်မှာ ၎င်းတို့၏အင်ဂျင်သည် သီးခြားမေးခွန်းများအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ ကျွန်တော် သိပ်မသုံးဖူးပေမယ့် သူတို့ရဲ့ အင်ဂျင်ကို အခြေခံထားတဲ့ ယုတ္တိဗေဒနဲ့ အယ်လဂိုရီသမ်တွေအကြောင်း ကောင်းကောင်းကြားဖူးပါတယ်။